isilethikusebenza okukhulunywe uhlobo senhliziyo ezihlobene nokuntula okuphelele noma okuyingxenye kwegazi. Hlangana isifo can kwabesifazane nabesilisa. Nokho, kuba abesifazane abaphethwe isifo senhliziyo kaningi kunabantu. Izibalo ababhekene nazo emazweni asethuthukile ubeka ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo njengoba imbangela yokufa endaweni yokuqala.
Symptomatology isimo abesifazane kule sifo izingxenye izinkathi emihlanu ilandelana.
1. PIS Ungaqhubeka njengoba imizuzu emibili noma izinyanga ezimbili. Isikhathi sokuqala libhekene khona iningi ubuhlungu noma ukungaphatheki ngemuva breastbone. Ngesikhathi izinyathelo ngeke bavunyelwe ukuletha umzimba senhliziyo.
2. Isikhathi oyingozi. ubude bayo - amahora okuqala angu-emva uphawu ukuqala. Izimpawu ukuhlaselwa isifo senhliziyo kwabesifazane kule nkathi, elinesimo ubuhlungu eqinile ezikhulayo esifubeni imbuthuma kwesobunxele ingalo, ingqwababa, ehlombe, emhlathini. Ehamba yokwesaba, ukuphefumula okusheshayo futhi ukushaya kwenhliziyo, ukulahlekelwa kungenzeka ukwazi.
Izimpawu ukuhlaselwa isifo senhliziyo kwabesifazane amafomu atypical zenzeka kanengi ukudlula amadoda.
Umumo besisu ukunikeza izimpawu nobuntu pancreatitis ibandakanya ukucanuzela kwenhliziyo nokuhlanza, ubuhlungu phezulu esiswini, ubuthakathaka.
ifomu somoya libhekene dyspnea futhi edema yamaphaphu - izimpawu somoya.
ifomu Cerebral. Izimpawu ukuhlaselwa isifo senhliziyo kwabesifazane zihlukile ngesimo isiyezi, ubuhlungu bekhanda ongaboni izimpawu zokungasebenzi kahle kwemizwa.
3. kuphele isikhathi okucindezelayo kungase kube izinsuku ezingu-10. Kwakuphakathi nalesi sikhathi uqala ukwakha isibanda endaweni necrotic.
4. Eight amasonto kwakheka isibazi, futhi le nkathi libizwa subacute.
5. Postinfarction isikhathi - lokhu kwelashwa futhi njengoba sinjalo isimo lesiguli.
Kutholwa ngemva kokushaywa yinhliziyo
Ngaphambili, ososayensi baye bangabaza ukuthi kungase kuthinte ubulili zomuntu ithuba lokulungisa isifo. Ezinye zazo sithambekele kulokhu kubuka, okuyinto enhle kakhulu ukuthi abesifazane ngenxa yesifo senhliziyo, mumbi khulu ukudlula ongakholwako amadoda. Ososayensi base-Jalimane lakhipha isinqumo: ubulili lomuntu akusho inendima ekhethekile ekululameni ngemva kokushaywa yinhliziyo. Ithuba lokusinda kuyafana in abesilisa nabesifazane. Enye into icacile - ngemuva kokushaywa yisifo senhliziyo kudingeka ngokushesha ukubuyisela igazi ligeleze liye enhliziyweni. Ungenza lokhu ngezindlela ezintathu: kwezokwelapha, surgically noma kokubili izindlela ndawonye.
Ngo sokuhlola, waba nengxenye 1435 kwabesilisa 502 - zesifazane. Balashelwe ngendlela efanayo ngemva kokushaywa yinhliziyo. Abesifazane amadala wahlupheka yisifo sikashukela, okwakunginika isikhathi nezinkinga ku uhlelo senhliziyo nemithambo yegazi. Nokho, umphumela wokugcina akalushongo mehluko. Ngakho, ukwelapha isiguli emiphumeleni ngemuva kokuhlaselwa yisifo senhliziyo njengoba phansi akufanele kubhekwe njengento engeyona isici.
Ngokuvamile, izibonakaliso unhlangothi futhi inhliziyo ukuhlaselwa zenzeka kubantu abaphethwe isifo sokuqina kwemithambo yegazi. Imikhumbi-coronary athwala umoya-mpilo nezakhi enhliziyweni. Kodwa ngo esivimba amanzi ngesitsha esinjalo eneziqongo - thrombus. umoya-mpilo umncane okungatheni kungase kuhlale 10 kuphela amasekhondi angu-inhliziyo. Ngemva 30 imiz yindlala amaseli inhliziyo izinguquko engelapheki. Ngemva kwamahora amaningana, zibancishe umhlaba necrotic ngokuphelele. Yiqiniso, zikhona nezinye izizathu eziningi, kuhlanganise nendaba yokukhula, ukukhuluphala, ukuba umlutha wotshwala, isifo sikashukela, amafutha amaningi egazini, ukubhema, ukuhamba kancane. Kunoma ikuphi kubalulekile ukubiza udokotela ngesikhathi hhayi ukushiya isiguli ngeminithi. Kubalulekile futhi ukuba iqembu maduze, "usizo lokuqala" ukukhuluma izisulu futhi bamduduze. Man yinhliziyo kuyinto ukubuyisa kakhulu, ukwesaba ngoba wayebona ukuthi usezokufa uyabethusa kuye. Zinakekele futhi obathandayo!
Utshwala futhi imithi elwa namagciwane: ngemiphumela. Kunganjani ukuhlanganisa imithi elwa namagciwane ngotshwala
Lapho futhi kangaki ungenza X-ray izingane?
Theory ka Raskolnikov enovelini "Ubugebengu Ziyisijeziso" futhi debunking yayo
Betonoraspredelitelnaya boom - nezinto ezidingekayo esakhiweni
Umthandazo ngaphambi kokulala kanye nemikhiqizo yawo yemilingo
Ajulukayo zezinyawo - izimbangela, ukwelashwa
Ithuluzi yasibamba HRC-84. Izimpawu, ukusetshenziswa, ukusebenza isimiso
Kolomna, ezibiyele: umlando kanye nezithombe
I-Dutch Atria - iklabishi kuwo wonke umuntu